I-Muğla Sıtkı Koçman Dyunivesithi yokugaya abasebenzi bezemfundo | RayHaber | raillynews
ikhayaJIKELELEImisebenziI-Muğla Sıtkı Koçman Abasebenzi beZiko leMfundo laseYunivesithi
mugla sitki kocman universty abasebenzi bezemfundo
IYunivesithi yaseMuğla Sıtkı Koçman iya kuqesha abasebenzi bezemfundo; Umthetho Nombolo 2547, uMmiselo wokuqeshwa kunye nokunyusa kwamalungu e-Faculty kunye nesicelo sokuchongwa kunye nokunyusa uMuqula Sıtkı Koçmanwww.personel.mu.edu.t isAmalungu angama-67 afakelweyo.
b) Abagqatswa abaza kwenza izicelo zoochwephesha abanxulumene nabo; www.personel.mu.edu.t is Ngokongeza i-4 (ezine) ye-PDF okanye imemori ephathekayo elungiselelwe kwifomathi ezi-1 (ezine) yePDF enefom yesicelo kwisikhokelo esingentla, kubandakanya isatifikethi seProfesa yokuDibanisa, uluhlu lokupapasha, umsebenzi wezenzululwazi kunye neempapasho, kunye noxwebhu lwenkonzo kwiNkqubo yokufaka isicelo kwi-petition. kunye XNUMX (kunye) nefayile epapashiweyo epapashiweyo kunye neCandelo labaSebenzi.
Abaviwa abagqibe kuviwo lokuNxibelelanisa ubuProfessor kwaye bafumana isihloko se-Associate profesa kodwa bengalungenanga uvavanyo ngomlomo; Iimviwo zomlomo ziya kwenziwa ngejeli ukuba zimiselwe yiBhodi ye-Intanethi (i-UAK) emva kokugqitywa kwesicelo. (Inqaku lesi-4 leMiyalelo yokuNyulwa nokuKhuthaza ukuFaka isicelo kwiZiko laseMuqula Sıtkı Koçman University)
QAPHELA: Akukho msebenzi unokufaka isicelo ngaphakathi kwinqanaba lokufumana inani lama-2547% elimiselweyo ngokweCandelo 38 loMthetho onguNombolo 20.
1) Bonke abaviwa kufuneka babenazo iimfaneleko zokungena kwinkonzo yeLizwe.
2) Izicelo ziya kwenziwa ngaphakathi kwiintsuku ezili-15 ukusuka kumhla wopapasho kwaye ulibaziseko kwisithuba asiyi kwamkelwa.
3) Ukulingana kweediploma ezifunyenwe kumazwe aphesheya kufuneka kuvunywe liBhunga leNtlanganisela.
4) Oonjingalwazi kunye noprofesa abanxulumene nabo abanakusebenza kumalungu egqirha.
5) Isiqinisekiso seNkonzo siyafuneka kwabo bafaka izicelo ezivela ngaphandle kwiDyunivesithi.
6) (*) Kuyadingeka ukuzalisekisa iimfuno zolwimi lwangaphandle ezichazwe kumanqaku afanelekileyo ommiselo we-İlişkin kwiMigaqo ekufuneka ethotyelwe ekufundiseni ulwimi lwangaphandle kunye nokufundisa ulwimi lwangaphandle kumaziko emfundo aphakamileyo ..
7) Ukuba Ulawulo lubona kufanelekile, inqanaba ngalinye lesibhengezo lingarhoxiswa.
UMuğla Sıtkı Koçman kwiYunivesithi yase-Koçman yokuQeshwa kwabaSebenzi